शून्य किलो सुनकाण्ड ! गृहमन्त्रीभन्दा ‘गोरे ग्याङ’ बलियो ! | Daily State News
शून्य किलो सुनकाण्ड ! गृहमन्त्रीभन्दा ‘गोरे ग्याङ’ बलियो !
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०९:१३ मा प्रकाशित - डेली स्टेट न्युज
ठूला माछा समातिने सम्भावना घट्यो, भुरासमेत उम्कने संकेत
पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामहादुर थापा बादलभन्दा सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुको स्वर चर्को देखिन थालेको छ । गृहमन्त्रालय रक्षात्मक बन्दैछ । सँगसँगै सुन तस्करीको मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्न थालेको छ ।
यो प्रकरणमा मूलतः दुईवटा अपराध सतहमा आएका छन् र छानविन गर्नुपर्ने विषय पनि यिनै दुईवटा हुन्ः एउटा-सुन तस्करी एवं संगठित अपराध । अनि अर्को चाहिँ सनम शाक्यको हत्या भएकाले ज्यान सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान । अहिलेसम्म साढे ३३ किलो सुन नभेटिए पनि सनमको शवचाहिँ भेटिइसकेकाले ज्यान मुद्दाबाट गोरेको ग्याङ उम्कन कठिन छैन ।
यो काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरु मुछिँदा प्रकाश अर्यालमात्रै मौन रहेका हैनन् कि सर्वेन्द्र खनाल पनि मौन छन् । पक्राउ परेका प्रहरीका अधिकारीको बचाउमा खनाल पनि बोलेका छैनन् ।
अपराध महाशाखालाई प्रश्न : गोरेलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ?
भरियाहरु पक्राउ गर्ने तर मालिक कहिल्यै पक्राउ नपर्ने तितो अनुभव छ । त्यसैले अहिले पनि सबै थोक गोरे हुन् भनेर अरुलाई छाड्ने त होइन भन्ने आशंका छ । त्यसो त सुन तस्करीमा गोरे कान्छो सदस्य हुन् । उनीभन्दा अगाडि नै भुजुङ गुरुङको समूहले पञ्चायतकालदेखि नै नियमितरुपमा सुन तस्करी गर्दै आइरहेको थियो ।
बरु समातिएकाहरु सहजै छुटे भने अब अचम्म नमान्दा हुन्छ । यो सुनकाण्डमा सघन अप्रेसन चलाएकोमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनमानसबाट स्याब्बासी र प्रशंसा पाइरहेका छन् । गृहमन्त्रीको कदममा जनताको राम्रो साथ देखिएको छ । तर, यो प्रशंसा त्यसबेलासम्म कायम रहनेछ, जतिबेलासम्म दोषीहरु उम्कने छैनन् ।- साभार:अनलाइन खबर